Gafadi Kura || रोचक Archives - Gafadi Kura Collection
काठमाडौं । सिन्डिकेट हटाउन सरकारले चालेको कदमविरुद्ध यातायात व्यवसायीले वैशाख २६ गतेदेखि अनिश्चितकालीन यातायात बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् । सरकारले संशोधन गरेको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका खारेजीको काम गर्दै व्यवसायीले आन्दोलनको निर्णय गरेका हुन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सांकेतिक रुपमा वैशाख २० गते सबै यातायातका साधन बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसपछि २६ गतेसम्म भद्रगोल रुपमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने रणनीति पनि तय भएको...
चितवन । नेपालमा अन्तर्राट्रिय स्तरको क्रिकेट रंगशाला’को अभाव भएको भन्दै बनाउन पहल गरीदिन क्रिकेट खेलाडीले गरेको सुभावलाई लिएर यतीखेर धुर्मुस सम्भाब्यता अध्ययन गर्न चितवन पुगेका छन् । सोमवार भरतपुर महानगरका प्रमुख रेणु दाहालले चितवनमा सबै सम्भावना रहेको भन्दै पश्चिम चितवनको निर्माणाधिन चित्रवन रंगशालामा उक्त खेलमैदान निर्माणका लागि जग्गा उपलव्ध गराउने घोषणा गरेकी थिईन्। धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २० मा क्रिकेट रंगशालाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ।फाउण्डेसनले बनाउन लागेको...
बझाङबाट धनगढी बसाई झर्दैगर्दा होटलमा टिभी देखेर अच्चममा परेकी सोनिकाले त्यहीबेला एउटा सपना पाल्नुभयो, कुनै दिन टिभीमा देखिने । बाल्यकालको त्यही सपना पूरा गर्न एक वर्षदेखि सोनिका ग्ल्यामर क्षेत्रमा हुनुहुन्छ । बूढानीलण्ठ स्कुलबाट विद्यालय शिक्षा पूरा गर्नुभएकी सोनिकाको परिवारको इच्छा डाक्टर, इन्जिनियर बनाउनमै थियो । यद्यपि, परिवारको इच्छा विपरीत नै विज्ञान विषयको अध्ययन छाडेर पत्रकारितामा प्लस टु गर्नुभएकी सोनिकाको रहर छ, नेपाली चलचित्रमा नै स्थापित बन्ने । नायिका रेखा थापाको...
तपाईलाई पोखराको महेन्द्र गुफा चमेरे गुफा र गुप्तेश्वर गुफा बारे थाहा छ होला । कतिपय घुम्न आईसक्नुभएको होला कति अब घुम्न आउने सोच बनाउनुभएको होला । यदि त्यसो हो भने याद राख्नुहोस पोखरामा अर्को गुफा पनि पत्ता लागेको छ । पोखरा लखनाथ महानगरपालिका वडा नं। ३३ मा रहेको भरतपोखरी स्थित तिक्लाङमा नयाँ गुफा भेटीएको हो । उक्त गुफा करीब डेढ किलोमिटर लामो भएको अनुमान गरिएको छ । तिक्लाङको स्थानिय तिक्लाङ...
काठमाडौं । साझा यातायातले शहरी सार्वजनिक यातायातका लागि नेपालकै पहिलो सेमी लो-फ्लोर (ज्यान) काठमाडौं ल्याएको छ । यो नेपालको सार्वजनिक यातायातमै सबैभन्दा महंगो र स्तरीय बस भएको छ ।भारतीय कम्पनी अशोक ले-ल्याण्डले तयार गरेको बस भारतबाट सोमबार काठमाडौं ल्याइएको हो । अब यो बस रूट पर्मिट लिएर सञ्चालनमा अाउनेछ । साझाले एउटा सेमी-लो फ्लोर बससहित २० वटा सिटी बस र ल्याउन लागेको छ । यो बस झण्डै ३५ लाखमा किनिएको...
सवारी लाइसेन्स लिनेहरुका लागि खुशीको खबर अदालतले नै दियो यस्तो आदेस हेर्नुहोस भिडियो सहित !
पुस २६, काठमाडौं । सरकारले सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सातवटै प्रदेशबाट वितरण गर्ने गरी आवश्यक प्रशासनिक संरचनाको खाका तयार पारेको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीले प्रदेश सरकारमातहत रहने यातायात कार्यालयबाट लाइसेन्स वितरण थालिने जानकारी दिए। काठमाडौं र देशका केही सीमित सहरबाट वितरण हुँदै आएका कारण सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि सर्वसाधारणले सास्ती खेप्दै आएका छन्। यो खबर सुरेशराज न्यौपाने ले आजको कान्तिपुर दैनिक मा लेखेका छन् । बर्सेनि लाखौं व्यक्ति...
दरबारमार्ग प्रकरणको नया मोड : सहमतिमा गरेको सम्पर्क रिस उठेपछि बलत्कार
१८ चैत, काठमाडौं । दरबारमार्ग बलात्कार काण्डका मुख्य अभियुक्त शैलेश कार्की अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् । ५ चैतमा पक्राउ परेका रामेछाप, दुरागाउँका कार्कीसँग बयान सकिएको छ तर, प्रहरीको अनुसन्धान अझै पूर्ण भइसकेको छैन । कार्कीसहितको समूहले ७ माघमा दरबारमार्गस्थित होटल ल्याण्डमार्कमा एक युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार गरेको अभियोग छ । प्रहरीकै मिलोमतोमा घटना लुकाइएको घटना बाहिर आएपछि यसले धेरैको ध्यान तान्यो । दरबारमार्ग प्रहरी वृत्तका तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मण ठकुरी...
अन्ततः अविवाहित चर्चित गायक राजेश पायल राई र एक्ली चर्चित अभिनेत्री रेखा थापा उही चैत्रमा विवाह बन्धनमा बाँधिने पक्कापक्की
१८ चैत्र २०७४, आईतवार अहिलेका सर्बाधिक चर्चित गायक राजेश पायल राई र चर्चित अभिनेत्री रेखा थापा विवाह बन्धनमा बाँधिने पक्का भएको छ । राजेश र रेखाले आगमी चैत्र २६ गते भव्य औपचारिक विवाह भोज दिएर वैवाहिक जीवन सुरु गर्ने भएका हुन् । अहिलेका सबैभन्दा व्यास्त गायक राजेशपायल अविवाहित हुन् भने रेखा ‘एक्ली’ । राजेशपायल र रेखा एकअर्कामा असाध्यै मिल्ने साथी हुन् भन्ने सबैलाई थाहा थियो । देशविदेशका कार्यक्रमहरुमा दुबैसँगै प्रस्तुत...
Brekine News पत्रकार रबि लामीछाने माथि आक्रमण अबस्था गम्बिर…
काठमाडौँ, नेपाल रबि लामीछाने नेपालका एक प्रचलित पत्रकार हुन् ! सामाजिक क्षेत्रमा उहाको ठुलो नाम र काम दुई ओटा नै छ ! लामो समय देखि पत्रकारिता रबि लामीछाने आफ्नो नाम राख्न सफल छ ! भखरै रबि लामीछानेको बारेमा नराम्रो कुरा आएको छ ! उहाको गम्बिर घाईते हुनु भएको छ ! लामो समय देखि उहालाई धेरै धम्कि आउने गरेको त हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा नै हो ! तर पनि आज...
राष्ट्रिय जनावर खानु हुन्न भन्ने ? खसीलाई राष्ट्रिय जनावर बनाए कति बाहुन जेल जान्छन् ? ” फेरी लगाए यस्तो डरलाग्दो आरोप
काठमाडौँ राष्ट्रिय जनावर खानु हुन्न भन्ने ? खसीलाई राष्ट्रिय जनावर बनाए कति बाहुन जेल जान्छन् ? ” (भिडियो हेर्नुहोस)। आङकाजी सेर्पा बेलाबखत भिभिन्न अभिब्यक्तिका कारण चर्चा र बिबादमा आइरहने जनजाति नेता हुन् ।केहि दिनअघि पृथ्वी जयन्तिका दिन देशब्यापी ‘राष्ट्रिय एकता दिवस’ मनाइरहँदा उनैको अगुवाईमा पृथ्वीनारायण शाह र दिवसको विरोध गरेपछि उनि पुन: विवादमा परेका थिए । शेर्पाकै अगुवाईमा किर्तिपुरमा पृथ्वीनारायण शाहको फोटोमा थुकेर बिरोध कार्यक्रम गरिए सँगै उनको चौतर्फी...